खुल्ला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा ; नेपालको ऐतिहासिक बेइज्जत | नेपाल दर्शन
खुल्ला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा ; नेपालको ऐतिहासिक बेइज्जत
प्रभात अधिकारी १४ आश्विन २०७६
के नेपाल अहिले सम्म असभ्य थियो ?
नेपाल सभ्यताको जननी हो । संसारलाई वेद सिकाउने, योग, ध्यान र ज्ञानको ज्योती फैलाउने देश हो नेपाल । यसको गरिमाको बारेमा व्याख्या गरेर सकिदैन । भगवान गौतम वुद्ध देखि राजा जनक, शिव भुमी, राम भुमी र महान ऋषि महर्षी हरुको देश हो । जतिवेला आजको विश्वको सम्पन्न भनिने राष्ट्रहरुको खोजि सम्म नभएको अवस्थामा नेपालमा विश्वलाई नै चकित पार्ने ज्ञानको साधना हुन्थे । कतिपय देशहरुको इतिहास नै हाम्रो देशको सिंहदरवार र हनुमान ढोका दरवार जति पुरानो पनि छैन ।
आज विश्व वेद र पुर्विय दर्शनको सिको गर्न खोज्दै छ । तर नेपालको वर्तमान राज्य संयन्त्र भने नेपालमा केहि छैन, नेपालको गरिमा केहि छैन भन्ने जस्तो भ्रमको सिर्जना गरिरहेका छन । खुल्ला दिशा मुक्त देश घोषणा अहिलेसम्मकै राष्ट्रिय बेइज्जत हो । जुन गर्नै नहुने कार्य नेपालका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा भयो । यस्तो घोषणा गर्नुको कारण आजका मितिसम्म नेपालीहरु चर्पी प्रयोग गर्दैन थिए भन्ने नै हो । आजका मितिसम्म नेपालीहरु असभ्य थिए भन्न खोजेको हो सुझबुझका साथ । आजबाट बल्ल नेपाल सभ्य र संस्कारित भए भन्न खोजेको हो ।
अझ प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा यस्तो घोषणा गराइयो, यो कति आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको काम भनेकै यस्तो कार्यहरुमा उपस्थित हुने मात्र हो ? के यस्ता कार्यहरु चिनमा हुन्छ? भारतमा हुन्छ ? त्यहाँका प्रधानमन्त्री हरु यस्तै घोषणाका कार्यक्रमहरुमा प्रमुख अतिथि भएर जान्छन त ? यो पनि विचार गर्नै पर्ने विषय अवश्य हो । राष्ट्रिय बेइज्जतको अर्को पाटो । अर्काे विडम्वना भनेको यो कार्यको सुरुवाती घोषणा तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवबाट भएको थियो, २०६८ सालमा । त्यसपछी गैरसरकारी संस्थाहरु, नेपाल सरकार तथा स्थानिय निकायहरुले भटाभट नाचगान गर्दै एक पछि अर्को जिल्ला र शहरहरु खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरे । खानेपानी धारको प्रयाप्त उपलब्धता अवश्य हरेक गाउ र शहर हरुमा छैन, तर चर्पी लाई किन यती महत्व दिइयो ? महत्व त चर्पी भन्दा स्वच्छ खानेपानी कै होला !
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका एक गाउँमा खानेपानीको धारा नै नरहेको बताए । ‘पानी भए पो शौचालय सफा हुन्छ, एक घर एक धारा कहिले पूरा हुन्छ भन्न सकिन्न, कतै त पूरै गाउँमा समेत खानेपानीको धारा छैन,’ उनले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा भने । हासो भन्ने या ठट्यौली तर यो वास्तविकता हो । मुर्खहरुलाई उपलब्धीको बारेमा मतलव नै छैन, घोषणा गरेर नाक ठुलो पार्न पाए भैगयो । एउटै पुल तिन पटक उद्घाटन हुने देशमा यसलाई पनि सामान्य रुपमै लिदा उपयुक्त होला । प्रभावको हिसाबले तौल विहिन घोषणा ।
विसं २०६८ सालमा एक घर एक चर्पी नारासहित सुरु गरिएको थियो खुल्ला शिामुसक्त घोषणा अभियान । विगत ८ वर्षमा निकै तामझामका साथ, हरेक गाउँ गाउँमा स्थानिय सरकारहरुको संलग्नता तथा विदेशी दातृनिकायहरुको सहयोगमा अधिकाशं गाउहरु, टोल नगर तथा शहरलाई खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गरियो । ठुला ठुला बोर्डहरुमा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रमा यहाँलाई स्वागत छ जस्तो कुराहरु लेखेर भित्ता भित्तामा टासिएको छ । कास्कीलाई नेपालको पहिलो खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा गरियो २०६८ मै ।
नेपाल सरकारको खानेपानी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर करिब ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ वटा शौचालय छन ।यो संख्या जम्मा घरपरिवार संख्याको एक तिहाइभन्दा केही बढि मात्रै हो । तथंक विभागले सार्वजनिक गरेको ०७४ को जनसंख्या र घरपरिवारसम्बन्धी प्रक्षेपित तथ्यांकीय विवरणमा मुलुकमा १ करोड ४८ लाख ५० हजार ३२ भरपरिवार रहेको उल्लेख ६ । (स्रोतः कान्तिपुर समाचार १४ असोज) अव भनौ कसरी एक घर एक चर्पी कायम भयो । नेपाल सरकारकै तथ्यांकअनुसार नेपाल खुल्ला दिशामुक्त भएकै छैन । हुदै नभएको कार्यको घोषणा गरेरै भएपनी राष्ट्रिय बेइज्यत गर्ने काम भयो, नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ।
सरसफाइको मामलामा सिंहदरबार कै मन्त्रालय र बिभागहरुका शौचालय हेरे हुन्छ, हालत कस्तो छ । सबै जस्तो सरकारी अस्पताल र कार्यालयहरु पनि नमुनाका लागी हेर्न सकिन्छ । बिगत लामो समय देखी सरसफाइ होस भनेर कुरिरहेका जस्ता । बल्ल काठमाडौ बिमानस्थल केहि सुधार आएछ, सायद एक मात्र उदाहरण होला यो !
चर्पी आवश्यक छैन त ?
चर्पी अत्यन्त आवश्यक कुरा हो, घर जस्तै महत्वपुर्ण । नेपालमा पहिले धेरै जनघनत्व पनि थिएन, त्यसैले चर्पिको आवश्यकतामा परेन यो सामान्य विषय नै हो । मानिषहरुलाई खुल्ला चउर नै शौचालयको रुपमा प्रयोग गर्दथ्ये । जसरी आधुनिक भनिने समाजमा घरभित्रै चर्पी अर्थात प्रत्येक तल्लामा चर्पीको निमार्ण गरिन्छ र नुहाउनको लागी तातोपानीको व्यवस्था सहितको निमार्ण गरिन्छ । तर यो अत्यावश्यक विषय त अवश्य होइन । प्रत्येक कोठा वा तल्लामा चर्पी आवश्यक किन पर्याे ? अवश्य जनघनत्व र सुरक्षाको कारण यस्तो कल्पना गरिएको हुनुपर्छ । ठिक त्यसरी नै पहिले पहिले नेपालमा चर्पी कम प्रयोगमा आउनु सामान्य हो । जनसंख्याको चाप र शहरीकरणका कारण यसको आवश्यकता बढनु स्वभाविक हो । यसमा अच्चमको विषय नै केहि छैन । समय परिस्थिती अनुसार आवश्यकता हेरी चर्पीको निर्माण भइरहेकै छ ।
काठमाडौमा सार्वजनिक शौचालय अत्यन्त कम छन । पैसा तिरेर शौचालय प्रयोग गर्छु भन्दा पनि सुविधा पाउने अवस्था छैन । काठमाडौमा केहि समय बसेका हरुलाई केहि हदसम्म सार्वजनिक शौचालयका बारेमा थाहा हुन सक्छ । विकल्पका रुपमा उनिहरु अस्पताल, सरकारी विद्यालय र कलेजहरु पनि झुक्याएर प्रयोग गर्न सक्छन आकस्मिक अवस्थामा तर जो पहिलोपटक काठमाडौँ आएका छन, उनिहरु कता जाने ? पैसा तिरेर सेवा प्रयोग गर्छु भन्दा पनि सहज छैन ।यी गणतान्त्रिक मतियारहरुले देशका साना ठुला सदरमुकाम र बजारहरुमा कहाँ कति शौचालय बनाए आजका मिती सम्म ?
हामी दुध बेच्न हुदैन भनेर छिमेकमा निशुल्क प्रदान गर्ने संस्कारका सदस्य हौ । आज पानि किनेर खानु पर्ने अवस्था छ । हामी अतिथी देवो भव भन्ने मन्त्रलाई सामाजिक मार्गनिर्देशन मान्दछौ । आज समाज कहाँ पुग्यो ? आज पैसा तिरेर शौचालय प्रयोग गर्छु भन्दा पनि पाउने अवस्था छैन । देशका प्रमुख शहरहरुमा यो स्थिती कायमै छ, काठमाडौमा मात्र होइन, पोखरा, विरगंज, धरान, इटहरी, भरतपुर जहातही समस्या एकै छ । तर सरकार गाउ गाउमा खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरेकोमा घिरौला जत्रो नाक बनाउदैछन ।
एउटा दृष्टान्त लिऔँ, गाउमा खेति किसान गर्नै नेपालीहरुको खेतवारी र घरको विचको दुरी केहि घण्टा सम्म टाढा हुन सक्छ, यस्तो अवस्थामा खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र भनेर घण्टौ यात्रा गरेर घरसम्म पुग्नै पर्छ भन्न खोजेको हो ? मानिलिऔ, खुल्ला दिशामुक्त को अर्थ प्रत्येक घरमा एक शौचालय भन्ने हो भने सम्भव होला तर घर बनाउन सक्नेले मात्र शौचालय बनाउन सक्छ । यसलाई पनि मध्यनजर गर्नै पर्छ । जुन देशमा ३०-४० प्रतिशत जनता स्वच्छ खानेपानीको सेवाबाट वञ्चित छन भने त्यो देशमा खुल्ला देशमुक्त घोषणा गर्नुको के अर्थ ।
नेपालको वैदिक विरासतमाथी खलल पुर्याउन यस्ता घृणित कार्यहरु भइरहेका छन । पश्चिमाहरु नेपालीलाई असभ्य हुन, जंगली हुन भनेर प्रमाणित गराउन चाहन्छन । किनभने इतिहासमा नेपालले अंग्रेजलाई धपाएको थियो । त्यसैको रिसिइवि साध्न चाहन्छन । उनिहरु नेपालको वैदिक पहिचान पुर्ण रुपले ध्वस्त गराउन चाहन्छन । बढ्दो धर्मान्तरण र धार्मिक द्धन्दको परिकल्पना पनि एउटै विषयका विभिन्न आयामहरु हुन । जसरी हुन्छ नेपाल र नेपालीलाई अपमान गर्नु परेको छ पश्चिमाहरुलाई । त्यसैले केहि आर्थिक सहयोग सहित नेपाल सरकारलाई साझेदारी गरेर यस्ता कार्यहरु गर्छन पश्चिमा । नेपाल सरकारका स्वाठँहरु यस्तो बुझ्ने चेष्टा गर्दैनन ।
खुल्ला दिशामुक्त नेपाल बनाउन सहयोग गर्ने मुलुकहरु तथा विदेशी संस्थाहरुले लेखेर राख्नेछन । नेपालीलाई चर्पी प्रयोग गर्न सिकायौ, प्रत्येक नेपालीको घर घरमा शौचालय बनाउन सहयोग गर्याै भनेर भन्ने छन । वैधानिक तथा औपचारिक रुपमै आजका मितिसम्म सार्वजनिक स्थानमा हामिले शौच गर्ने गर्दथ्यौ भनेर प्रमाणित गरिदिए । इतिहास नै बन्यो, इतिहासकै बेइज्यत गरेर बन्यो ।